Abwaan Sooraan oo maanta ku geeriyooday magaada Burco | KEYDMEDIA ONLINE
Abwaan Sooraan oo maanta ku geeriyooday magaada Burco
Alle ha u naxariistee waxaa magaalada Burco maanta ku geeriyooday Majaajiliisteihii caanka ahaa Abwaan Sooraan Ismaaciil Sugulle.
BURCO, Soomaaliya – Sida la xaqiijiyay waxaa maanta magaalada Burco ku geeriyooday Alle ha u naxariistee abwaan Sooraan Ismaaciil Sugulle, oo ka mid ahaa Majaajileystayaasha loogu jecelyahay gayiga Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland.
AUN, Abwaan Sooraan ayaa xanuunsanaa dhawaanahaan, waxaana soo ritay cudurka saf marka ah ee COVID-19, wuxuuna ugu dabeyn maanta ku geeriyooday isbitaal gooni ah oo loogu tala galay in lagula tacaalo dadka qaba Karoona Fayrus.
Majaajileys-taha ayaa caan ku ahaa, sheekeeyinka iyo sameynta Filimada gaagaaban ee la xariira dhaqanka Soomaalida, wuxuuna ugu horreeyay jilaayasha logu jecel yahay degaannada looga hadlo afka Soomaaliga.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, oo ka tacsiyeeyey geerida abwaan Sooraan, ayaa yiri, “Sooraan waxa uu ka mid ahaa hal abuurrada sida weyn uga qeyb qaatay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed fankiisa iyo sheekooyinkiisuna ahaayeen kuwo farriin xambaarsan, Jannadii Firdows Allaha ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna samir iyo iimaan Allaha ka siiyo”.